Yakachipa Fertilizer Counterflow Kutonhora Muchina Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Counter Kuyerera Kutonhora Machine chizvarwa chitsva chemidziyo yekutonhora ine yakasarudzika kutonhora mashandiro. Iyo mhepo inotonhorera uye yakakwirira hunyoro zvinhu zviri kuita yekumashure kufamba kuti vabudirire zvishoma nezvishoma uye zvakafanana kutonhora.
Chii chinonzi Counter kuyerera kutonhora muchina?
Chizvarwa chitsva che Counter Kuyerera Kutonhora Machine yakatsvakurudzwa uye yakagadziriswa nekambani yedu, iyo tembiricha yezvinhu mushure mekutonhora haina kukwirira kupfuura tembiricha yemukamuri 5 ℃, mwero wemvura yekunaya hausi pasi pe3.8%, yekugadzirwa kwemapellets emhando yepamusoro, kuwedzera nguva yekuchengeterwa kwemapellets nekuvandudza iyo mabhenefiti ehupfumi akaita basa rakakosha. Iyo modhi inoshandiswa zvakanyanya kunze kwenyika uye iri yekumberi kutsiva kwetsika kutonhora michina.
Shanda Musimboti weCounter kuyerera Kutonhora Muchina
Kana zvimedu kubva kumuchina wekuomesa zvichipfuura ne Counter Kuyerera Kutonhora Machine, vanosangana nemhepo yakapoterera. Chero bedzi mhepo yakazara, ichabvisa mvura kubva pamusoro pezvikamu. Mvura iri mukati mezvimedu inoendeswa kumusoro neiyo capillaries yemagirosa e fetiraiza uye ndokuzotorwa nekupwa nemhepo, saka granules yefetiraiza inotonhorera. Panguva imwecheteyo, kupisa kunofurwa nemhepo, izvo zvinovandudza kugona kwekutakura mvura. Mhepo inoramba ichiburitswa nefeni kuti ibvise kupisa uye hunyoro hwefetiraiza manyoro munzvimbo inotonhorera.
Kushanda kweCounter kuyerera kutonhora muchina
Inonyanya kushandiswa kutonhorera kwakanyanya tembiricha granular zvinhu mushure megirazi. Muchina une yakasarudzika kutonhora mashandiro. Iyo inotonhorera mweya uye yakanyanya tembiricha uye yakakwira humidity zvinhu zvinofamba zvakapesana, kuitira kuti izvo zvinhu zvishoma nezvishoma zvadzikama kubva kumusoro kusvika pasi, zvichidzivirira kumeso kwekutsemuka kwezvinhu zvinokonzerwa neyakajairika yakatwasuka kutonhora nekuda kwekukasira kutonhora.
Zvakanakira Counter Kuyerera Kutonhora Machine
Iyo Counter Kuyerera Kutonhora Machine ine yakanaka kutonhora mhedzisiro, yakakwira degree of otomatiki, yakaderera ruzha, yakapusa mashandiro, uye yakaderera kugadzirisa. Iyo modhi inoshandiswa zvakanyanya kunze kwenyika uye ipamberi kutsiva kutonhora michina.
Temperature 1】 Tembiricha yezvinhu zvakatonhora haina kukwirira kupfuura +3 + ~ +5 ℃ yemukati tembiricha; kunaya = 3.5%;
】 2, Iyo ine yakasarudzika mashandiro e otomatiki pellet kubuda kana ichivhara pasi;
】 3, yunifomu kutonhora uye pasi mwero kupwanya;
Structure 4, yakapusa chimiro, yakaderera mashandiro emari uye diki nzvimbo yekugara;
Counter Kuyerera Kutonhora Machine Vhidhiyo Ratidza
Counter Kuyerera Kutonhora Machine Model Sarudzo
Kutonhora vhoriyamu (m)
Pashure: Yakapwanyika Coal Burner
Zvadaro: Michina Drum Sieving Machine
Nhanganyaya Chii chinonzi Rubber Belt Conveyor Machine inoshandiswa? Iyo Rubber Bhandi Yekutakura Mashini inoshandiswa kurongedza, kurodha uye kuburitsa nhumbi mune iyo wharf uye imba yekuchengetera. Iyo ine zvakanakira komputa dhizaini, yakapusa mashandiro, nyore kufamba, chitarisiko chakanaka. Rubber Belt Conveyor Machine zvakare yakakodzera fo ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Twin Screw Extrusion Fertilizer Granulator Machine? Double-Screw Extrusion granulation muchina inyowani nyowani tekinoroji yakasiyana neyechinyakare granulation, iyo inogona kushandiswa zvakanyanya mu feed, fetiraiza uye mamwe maindasitiri. Granulation inzira yakakosha kunyanya kune yakaoma poda granulation. Izvo n ...
Nhanganyaya Ndeipi Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator? Iyo Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator chishandiso chegranulation chinowanzoshandiswa mukugadzira mafotireza emakomponi, manyowa mafetiraiza, mafetiraiza manyowa, anodzorwa kuburitsa mafetiraiza, nezvimwewo .. Inokodzera kutonhora kukuru uye ...